Warqad Ku Socota Madaxwaynaha Puntland: Laguuma Dooran Buunbuunis ‘Boqortooyo La Isku Haysto Cida Leh’ | http://kismaayodaily.com
Waxaad adiga oo matalaaya magaca Dowlad Goboleedka Puntland, ka qaybgashay caleemosaar aan loo dhamayn. Mida kale, sida laga dareemay abaabulka, hantidii dadka ka dhaxasey ee lagu bixiyey iyo hadaladii aad ka jeedisey caleemo saarka, in ay u egtahay in aadan war u hayn cida dhabta ah ee saladanadaas dhaxalkeeda iska leh. Mida xigta, waxaad qudbadaadi ku furtay in 34 boqor ay iska dhaxleen boqortooyadaas. Taasoo ah mid ka fog xaqiiqada taariikhda dhabta ee saldanadaas, oo murankeeda iyo ismaandhaafkeedu weli taagan yahay.
Waydii boqorka iyo caa’iladiisa taariikhdii ‘Cumar Ismaail Sanwayne (Ina San Wayne) iyo Cali Faahiye Gedi (Calan Gube)’ oo ka mid ahaa dadkii baalka dahabka ka galay taariikhda halkankii lagula jiray gumaystihii shisheeye, dhagaysana waxay ku yirahdaan.
Calan Gube, oo ka tirsanaa abniyaadkii halganka daraawiishta Soomaaliyeed, markii uu ka war helay in calanka gumaysigii Talyaaniga uu ka dulbanayey sartii ay ku lahaayeen degmada Qandala, ee Gobolka Bari. Intuu fasax soo qaatey, ayuu yimid qandala. Waxuu halhaleel ugu koray gurigoodii, intuu soo dejiyey calankii Talyaaniga, ayuu bartii dab ku qabadsiiyey. Marka, kuwa aad maanta u caleemasaareyso iyo daba dhilifkoodii, waxay soo qabteen Cali Faahiye, oo ay gacanta u geliyeen gumaystihii Talyaaniga oo markab ku qaatey. Ka dibna, sayidkii ayaa isaga daraadiis madax furasho ugu qabsadey ergadii iyo askartii uu gumaystahii Talyaaniga usoo diray Soomaaliya.
Waa kan gabaygi Sayidka, ee garowso (source: Somalitalk).
NINKA GAALKA LA SIISAY, TALYAN(TALYAANI) LOO GARBADUUBAY. MARKAB GUUDKI LA SAARAY, GACAL SOW MA LAHAYN. WAXA GAALADA SIIYAY, GRACDII ————– WEEYOO. GARKIISOO LA JIRAA, MA GOOYAAN DHAMIDOOD.(DHAMAANTOOD).
Warka dulucdiisa wacay tahay, waa in aad ogaataa in QurboJoogta iyo DalJoogta ku abtirsada boqortooyadaas iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed ee xaqiiqada og, in ay aad uga xun yihiin ficilkaas, oo ah mid aan maantey munaasab ku ahayn, mark loo fiiriyo, xaalada ka jirta dalka Soomaaliya meel kasta. Dhinaca kalene, waxaa loo arki karaa ka qaybgalkaaga adiga oo matalaaya magaca Dowlada Puntland, mid soo noolaynaysa horgumo dadka xasuusisa boobki lagu sameeyey boqorkii dhabta ahaa iyo xoogagii shisheeye ee loo adeegsadey.
Mida xigta, boobkii boqortooyada, waxaa loo adeegsaday, xukuumadihii wadamada Carabta, ee aan deriska nahay, ka jiray waqtigaas iyo Gumaystahii shisheeye, oo loogu badalay sandareerto, maal aduun iyo waayid xornimadii soo jireenka ahayd. Sidoo kale, markii ay Soomaaliya xornimadeedii qaateyna, waxaa loo adeegsadey Dowladihii dhashay gumaystaha ka dib oo ay dad jifo ahaan ugu dhow ay madax ka noqdeen wadanka. Waqtigan la joogana, saldanaadaan buunbuuniskeeda iyo abaabulkeed hormood u noqday xukumadaada, oo adeegsanaysa magaca Dowlada Goboleedka Puntland, oo iyadana ku dhisan aqoonsiga shisheeye, inkasta oo ay ka duwan yihiin xoogagii Carabta iyo Gumaystaha.
Si kastaba ha ahaatee, xukuumadihii horay usoo maray Puntland, waxay markasta iska xeeriyaan, oo ka asturnaayeen gabood fal noocaan oo kale ah madaama saldanada nafteeda oo aan macno wayn iyo maqaan lagu sheego aysanba lahayn. Waxaa arintaan tusaale guud u ah madaxdii soo martey talisyadii Puntland, gaar ahaana Madaxwaynahii hore ee Dr. Abdirahman Faroole uu ku dadaalay, intii karaankiisa ah, in uu ka dhowro eex hosaad iyo takrifalid nadhaamka dowladnimo ee dadka ka dhexeeya. Adiguna waad garanwaysay arintaas ama waad iska indho iyo dhego tirtay.
Waxaa soo diray: Mohamed Barre – Junlay “Buluf”, qoraa madaxbanaan oo wax ka qorana arimaha Soomaalida, degana magaalada Minneapolis, MN – junlay99@aol.com
Kismaayodaily On May - 26 - 2014
Jubbaland, Puntland, Somaliland